Hotanterahina ny alahady 13 janoary 2019 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny fiangonana Tranovato Ambatonakanga izy io. Raha mahazatra ny firenena tandrefana, hoy ny mpikarakara, ny mankalaza ny noely amin'ny faha 25 desambra, dia ny alahady faharoa manaraka an'io daty io no ankalazan'ny tatsinana ny fahaterahan'ny mpamonjy. Mbola manan-danja eo amin'ny fiangonana rahateo izany ka nofidian'ny AFATRA homarihina amin'ny hira karazany maro : hira fifohazana, izay maneho fomba iray nandraisan'ny malagasy ny fivavahana kristianina, no anisan'ny horedonina amin'izany. Ao koa ireo rivotra entin'ny mpino avy any afrika izay mampientana ny fo sy ny fanahy. Efa vonona ny AFATRA sy ny mpitendriny koa manasa antsika hifaly sy hidera ny Tompo ary hiorina am-panantenana amin'ny tenin'ny soratra masina hoe: " Fa indro, Izaho nahary lanitra vaovao sy tany vaovao ", hoy ny fanentanan’izy ireo.